Isitudiyo esizimeleyo kumgangatho ophantsi. - I-Airbnb
Isitudiyo esizimeleyo kumgangatho ophantsi.
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguAlain
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uAlain iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Isitudiyo esizimeleyo kumgangatho ophantsi kunye nomnyango wabucala, ikhitshi, iWC kunye negumbi lokuhlambela, ishawari.
Iqula kwabelwana ngalo nathi.
Ikhitshi lixhotyiswe nge-microwave, i-oven encinci yombane, i-hob yombane ephindwe kabini, i-coffee maker yokucoca kunye ne-Senséo, i-kettle, i-toaster, ifriji encinci kunye nefriji encinci eneedrowa ezi-3.
I-Wifi iyafumaneka xa uyicela.
4.75 · Izimvo eziyi-100
Lo mmandla cwaka, indlu ngaphandle kwedolophu kunye kubekwe phezu eziphakamileyo ekungeneni Le Luc kwindlela Brignoles kwaye kude kumbindi wedolophu (4 km) ekupheleni esitalatweni kunye exit ngoko akukho kwegazi.
Amaziko amaninzi okuthenga angaphakathi kwi-radius ye-3 ukuya kwi-4 km, kodwa imoto iyimfuneko ukuyenza. Kuya kuba yinto efanayo kwiivenkile (ibhaka, ivenkile yokutya, njl ...).
Le lali endala Luc nokuba of Cannet des Maures kubona -ngomtsalane ngokuqhelekileyo iilali var, kunye ezitratweni zayo emxinwa apho ukwazi ukuhamba kwaye uthole yokufuna apha naphaya, ezifana Clock Tower and intsimbi nenqaba yayo ngokuqhelekileyo Provençal, okanye inqaba enamacala ama-27m ukuphakama. Iikhilomitha ezi-3 ukuya phambili, iziko lokuzonwabisa laseLe Luc kunye nehlathi elikhulu lepine, ichibi kunye nemithi.
Eyona nto inamandla iya kukwazi ukukhetha phakathi kwamaziko amane eequestrian eLuc kuhambo lokuhamba, iipaki ezimbini "zokukhwela umthi" ngaphakathi kweekhilomitha ezili-12, eyona ndawo idumileyo yegalufa kwiikhilomitha ezingama-20 okanye kutheni ungayi karting, ubhaptizo eFerrari okanye nokuba ngaphezulu (uF1 xa uceliwe) nge-4 km kwaye ngokubona unomdla wokutsibela i-tandem parachute kwi-Luc… iSekethe yaseLuc-en-Provence kunye neSikolo sayo esiPhaphayo zilindele abaqhubi abafundayo be-F1 no-F3.
Umbuki zindwendwe ngu- Alain
Kukho umntu ekhaya rhoqo, ungalibazisi ukunxibelelana nathi ngayo nayiphi na imibuzo kunye neengxaki ezinokuvela.
Siya kuvuya kakhulu ukwazi kunye nokuxoxa nawe.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Le Luc